कुनै समय १०० केजी तौलकी जरिन खान यसरी घटाएकी थिइन् तौल
22 Feb 2020 | शनिबार, १० फागुन, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
एजेन्सी । अभिनेता सलमान खानकोे फिल्म ‘वीर’बाट बलिउडको यात्रा तय गरेकी जरिन खान कुनैबेला १०० केजी तौलकी थिइन् । सलमानले फिल्ममा लिने पक्का गरेपछि उनलाई पहिलो शर्त तौल कम गर्नुपर्ने राखेका थिए ।
उनले प्रयास गरिन् तर पूर्ण सफल भइनन् । जसका कारण फिल्म ‘वीर’ रिलिजपछि हिरोइनको मोटोपनमाथि समिक्षकले कटाक्ष गरेका थिए ।
त्यसपछि भने जरिनले आफूलाई पूरै परिवर्तन गरिन् । ४३ किलो तौल घटाएर ५७ पुर्याइन्। । जंकफुडकी सौखिन उनले यहीँबाट बानी सुधार थालिन् । तौल घटाउने उनको तरिका भने ८० प्रतिशत खानामा नियन्त्रण र २० प्रतिशत एक्सरसाइज हो ।
अहिले त उनले खानपानदेखि एक्सरसाइजसम्मको रुटीन नै बनाएकी छिन् । उनी बिहानै खाली पेटमा १ लिटर पानी पिउँछिन् । बिहानको खाजामा ब्राउन ब्रेड टोस्ट र फलफूल हुन्छ । दिउसो भेजेटेबल सुप पिउने गर्छिन् ।
दिउँसोको खानामा भने भात र ग्रिल्ड चिकेन हुन्छ थोरै मात्रामा । बेलुकी खाना खान छाडेको धेरै भयो उनले । बेलुकी ब्वाइल्ड तरकारी खाने गरेको बताउँछिन् । सुरुमा उनले स्वीमिङ, जगिङ र जिममा धेरै समय बिताइन् ।
अहिले भने बिहान जगिङ, कार्डियो वर्कआउट, तौल घटाउने तालिम र योगा गर्छिन् । सुरुमा मोटी भनेर जिस्काउनेहरुलाई अचेल उनी उल्टै जिस्क्याउँछिन् ।
वुहानकी एक युवतीमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएन, तैपनि परिवारका पाँच सदस्यलाई सर्यो
एजेन्सी । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण विश्व त्रासित रहेको छ । एक रिपोर्टका अनुसार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नभएकी महिलाबाट उनका पाँचजना परिवारलाई कोरोना भाइरस सरेको छ ।
एमसिसीबारे यसाे भन्छन् अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी सरकारको सहायता कोष मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेसन (एमसिसी) परिमार्जनसहित अनुमोदन हुने बताएका छन् । आज यहाँ पत्रकारहरु
जब अमृताले मेरो भागको सबै सम्पत्ति मागिन्
एजेन्सी । बलिउडमा चर्चित अभिनेता हुन् सैफ अली खान । बलिउडमा लामो समय बिताएका उनी बेलाबेला जेठी श्रीमती अमृता सिंहका कारण चर्चामा आउने गर्छन् । उमेर अमृताभन्दा सैफ धेरै वर्षले कान्छा रहेका थिए ।
काठमाडौँ । शनिवारको दिनलाई भगवान शनिको दिन मानिन्छ । कुण्डलीमा शनिदोष छ भने त्यस्ता व्यक्तिले शनिवारको दिन भोजन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
कुन दिशातर्फ फर्केर भोजन गर्दा के हुन्छ ?
थाहा पाउनुहोस् कुन–कुन राशिकाबीच विवाह गर्न गल्ती हुन्छ ?
काठमाडौँ । धेरै व्यक्ति घरमा खाना प्याक गर्न पनि अखबारै प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तारेका, भुटेका खाद्य पदार्थको तेल सोसियोस् भनेर पनि अखबारमा ती चीज राख्ने गरिन्छ । यसरी अखबारमा राखिएको कुनै पनि खाद्यपदार्थ हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै धेरै जोखिमपूर्ण हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
‘जसको मिल्ने साथी सिंह हो’